Taariikhda My Butros » Haweenka Successful waxaa All yeelan karaan?
Last updated: Feb. 14 2020 | 2 min akhri
…Ama waa maanta "overachievers" wiiqaysaa xidhiidhkooda?
"Waxaad ka yimaadeen meel fog, ilmaha,"Sheegayaa ganacsiga caan ah ugu sacabatumay horumar ah naag maanta. Oo sida xaqiiqada ah waxaan soo gaaray!
Haweenka qariib ahaan ka maalin iyo da'da marka aanan xataa saari kari votes, si ay awood siyaasadeed oo lagu xisaabtami karo.
Xitaa ka muuqdeen masraxa shirkadaha, badan oo inaga mid ah ayaa kor u jaran shirkadaha in doorka hogaaminta, maareynta miisaaniyadooda waaxda weyn oo ku keceen in inta badan ay yihiin rag.
Add to this xaqiiqada ah in aan inta badan leedahay guryahayaga u gaar ah, lacag noo gaar kasban, oo waxay leeyihiin fikrado noo gooni ah. Oo erayadii kooxda gabyaya, AFURAAY Child, "Waxaan ku xirnaan ii on, haddii aan rabin. "
Bravo Laba! Qaado qaanso.
Laakiin, halkan ka ganacsiga off…
Waxaa laga yaabaa in ganacsiga dumar guul Maanta ayaa waxaa lagu guuleystay, halka guuldarro ee jacaylka.
Oo halkan sababta.
Aad u badan oo naga mid ah ay ku guuldareysato inay aqoonsan yihiin in badan oo ka mid ah sifooyinka noo oggolaan in ay xukumaan wxay, waxay keeni kartaa dhibaato kunoqotay in qolka hurdada. Hello?!
In dagaal ee labka iyo, aynu ku guulaysanayno dagaalka balse laga badiyay dagaalka?
Or, in erayadii Dr. Phil, "Sidee workin in’ for the '?"
Halkan jira afar xaaladood caadi ah in lagu muujiyo sida aan mararka qaarkood emasculate ragga la'aantood aadanba.
Waxaa laga yaabaa in aad dambi ah wax yar tahay. Akhri oo u ogaato.
THE "Waa waddadayda AMA maraynaa" maskax— Sure, jagooyinka awooda ee adduunka shaqada noo oggolaanaysaa in aan u yeerin hawadooda noo kuwii aan kiraystaan ​​iyo bixiyo adeegyada ay. Laakiin, xiriirka shakhsiga ah ay ka duwan yihiin. Waxay u malaynayeen tahay in ay iskaashi kaas oo labada dhinacba’ baahan yahay iyo dareenka ah la dejiyo, ma doorka waalidnimada ama samatabbixinta.
Jaceeylka HAYSASHADA—Ilaahay ha barakeeyo ilmaha in uu helay isaga u gaar ah. Qaarkood aysan marna naga mid ah ay ku guuldareysato inay ha asxaabtiisa aannu og tahay in wax alaabtiisu waa ku-burka of our guul iyo iska leh si gaar ah noo, gaar ahaan kulaylka muran. "Gurigayga, my baabuur, lacagtaydii. "My hadalka!
"Ee waxaan ahay naag i maqal guuxeen "syndrome—Laga soo bilaabo isagoo awood u leh in ay lacag sameeyaan noo gooni ah oo wax ku siinayso si wanaagsan noo gaar qabka, in fursadaha taranka iyo ansaxinta in X rag awoodo ka baxday xiisihii ay maalin kasta nolosha, qaar naga mid ah ayaa la siinaya fariin ah in ragga yihiin dispensable in erayada iyo falalka noo.
IYADOO taagan BIG arrimaha YARYAR—Tagsanaayeen dagaalladii hadallo siinayaa dumarka qaarkood dareen ah awood iyo muhiimadda ay leedahay, halka tagay nin caasi ah oo u adkeysta in isbedel.
Strong ma aha mar walba qaldan.
Laakiin Miisaankiisu kuwaasi waa badanaaba ka wanaagsan.
Haweenka waxay dhammaan heli karaa?
Sure, laakiin gaadhnaa qof’ bixin tab ah— kaas oo ku baaqay in la sii in yar oo a iyo qaato iyo xirfadaha gorgortanka isku Walaalo bixio shaqaaleeyaan ka 9 si ay u 5. Ka dib dhan, sida Billy Dee William sheegayaa Diana Ross in filimka Mahogany, "Guusha aan qof si ay u la micno tahay nothin wadaagaan '!"